बस्तीभित्रको अस्तव्यस्त वातावरण सुधारमा कहिले ध्यान दिने ?: News Of Tokha
बस्तीभित्रको अस्तव्यस्त वातावरण सुधारमा कहिले ध्यान दिने ?
काठमाडौँ । शुक्रबार, चैत ९, २०७४ - कुनै समयमा फाटफुट सवारी साधन गुड्ने बस्ती भित्र समयले कोल्टे फेरेसँगै टोखाको मूल बस्ती भित्रको बाटो भएर दैनिक हजारौंको सँख्यामा ठूला तथा साना सवारी साधनहरू आवतजावत गर्ने गरेको छ। बाटोको भारबहन क्षमता भन्दा कयौ गुणा बढी वजन भएका मालवाहक सवारीहरू निर्वाध आवतवाजत हुँदा एकातिर वस्ती अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर बस्ती नै जोखिममा पर्न थालेको छ।
ऐतिहासिक महत्व बोकेको प्राचीन बस्तीको प्राचीनतालाई जिवन्त राख्न केही महिना अघि मात्र लाखौँ रकम खर्चेर मूःध्वाखादेखि हासल चोकसम्म बिछ्याएका इट्टाहरू अधिकांश कामै नलाग्ने गरी बिग्रि खाल्डाखुल्डी हुन थालेका छन्। साँघुरो सडकले थेग्नै नसक्ने गरी अत्यधिक मात्रामा निर्वाध गुड्ने सवारी साधनहरूको भार र चांपका कारण दैनिक सवारी जाम हुँदा समेत यसको व्यवस्थापन गर्न तिर न त स्थानीय सरकारको नै यस तर्फ गम्भीर ध्यान गएको देखिन्छ न त स्थानीय स्तरको नै ।
हामीसँग वैकल्पिक बाटो हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न किन सकिरहेका छैनौँ ? के हामीलाई यस्तै अस्तव्यस्त वातावरण मन परेर नै हो त ? होइन भने आखिर किन भएको बैकल्पिक बाईपास सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं ? ती बाइपास सडकबाट ठुलठुला मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनहरूलाई आवगमन गराउने वातावरण बनाउन किन सकि रहेका छैनौं ?
सडकका आसपासका घरहरू असोभाविक रुपमा हलिने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो सुनिन्न थालेको छ। त्यसै त भुकम्पबाट क्षति भएका घरहरू बाटोमा ठुल्ठुला गाडीहरू निर्वाध गुड्दा घरहरू जोखिम मोल्न बाध्य भएका छन्। यसको मर्म बुझ्ने कसले ?
हामीले परिचय दिँदा कहिले पनि भन्न नछुटाउने ऐतिहासिक बस्ती टोखा के यस्तै अव्यवस्थित र अस्तव्यस्तताले टोखाको ऐतिहासिकता पछि सम्म बाचिएला त ? जात्रा र उत्सवहरू सवारी साधनहरूको चापका कारण प्रभावित हुदै गैरहेको हामीले भोगि रहेका छौँ। तर पनि हामी चुपचाप सहेरै बसेका छौं। आखिर किन र कहिलेसम्म यो नियति भोगि रहेने ? के यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो मौलिक परम्परा र अस्तित्व बाँचिएला ?
यसको समाधानका लागि स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन नीति नियम बनाएर त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन अत्यावश्यक भैसकेको छ।
सवारी साधनको उच्च चापले केवल सडक मात्र अव्यवस्थित बनेको छैन। यसका कारण बाटोमा हिड्न खतराबाट मुक्त छैन। बाटोमा हिड्ने बटुवाहरूलाई हिड्न मुस्किल भैरहेको छ। विशेष विद्यालय जाने समयमा विद्यार्थीहरूलाई समेत सकस भैरहेको छ। विद्यालयमा गएका आफ्ना छोराछोरीलाई कुन बेला के दुर्घटना हुने हो भनेर अभिभावकहरूलाई चिन्तित बनाई रहेको अवस्था छ। हरेर्दा सानो विषय भए पनि यसबाट परेको चौतर्फि असरहरूलाई हामीले समयमा नै नजर अन्दाज गरेर समाधान गर्नुको विकल्प छैन।
समग्र मूल वस्तीलाई जिवन्त तुल्याई राख्न यसको निराकरणका लागि वडास्तरबाट नै तत्काल कर्डाईका साथ नीति नियम बनाएर लागु गर्नु पर्ने बेला भैसकेको छ । कुनै ठुलो दुर्घटना हुनु पुर्व नै समयमा समस्याको समाधान गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यस तर्फजनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको ध्यान जान शीघ्र आवश्यक भैसेको छ ।